सुशान्त र अंकिताको प्रेम सम्बन्ध कसरी भयो ? एक्कासी किन छुटेका थिए ? – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/सुशान्त र अंकिताको प्रेम सम्बन्ध कसरी भयो ? एक्कासी किन छुटेका थिए ?
सुशान्त र अंकिताको प्रेम सम्बन्ध कसरी भयो ? एक्कासी किन छुटेका थिए ?
एजेन्सी – एकसाता अघि बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको अचानक निधन भयो । उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले । सुशान्तले पासो लगाएर ज्यान फालेपनि परिवारले भने मृत्यु रहस्यमय भनेपछि मुम्बई प्रहरीले यस घटनालाई लिएर अनुसंधान गरिरहेको छ । उनको निधनपछि अहिले बलिउडमा परिवारवादको पनि चर्चा भइरहेको छ ।
यसै बिषयलाई लिएर केही अभिनेता तथा अभिनेत्रीमाथि अहिले प्रशंसकहरू पनि खनिएका छन् । यस्तै बलिउडमा अहिले सुशान्तको अंकिता लोखन्देसँगको सम्बन्धको पनि चर्चा भइरहेको छ । धेरैलाई सुशान्त र अंकिताको प्रेमसम्बन्ध कसरी छुटेको थियो भन्ने चासो बढेको छ ।
यी दुवै जनाको भेट टिभी सिरियल पवित्र रिस्ताको छायांकन भएको थियो । सिरियलमा काम गर्दै गर्दा सुशान्तको कुराहरु अंकितालाई मन पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरु एक अर्कामा आकर्षित भए । कुराकानी हुँदै गर्दा दुवैले एकअर्कालाई मन पराउन थाले । उनीहरुले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध बारे धेरै खुलाएनन् ।
रमाइला गरेका तस्बिरहरु भने शेयर गरिरहे । उनीहरुको तस्बिर शेयर हुन थालेपछि फ्यानहरुमा चर्चा हुन थाल्यो । उनीहरुको प्रेमसम्बन्ध ६ बर्षसम्म चल्यो । एककासी उनीहरुको प्रेमसम्बन्धमा फाटो आउन थाल्यो । सन् २०१६ मा सम्बन्धमा खटपटी शुरु भएपछि छुट्टिए ।
खासमा यी दुवै किन अलग भए । सुशान्तले आफ्नो करिअरलाई महत्त्व दिन चाहन्थे । उनलाई लाग्थ्यो विवाह गरेमा काममा मन नहुने र सफल भइदैन । उनीहरु सहमतिमा नै छुट्टिए । त्यसको केही समयपछि सुशान्तको नाम कृति सेनन, सारा अली खान र रिया चक्रवर्तीसँग पनि जोडियो । खासमा सुशान्तका साथीले उनले चोखो माया अंकितासँग गरेको दाबी गरेका छन् ।
कञ्चनपुरकी २३ वर्षिय अदिति जोशी ब्लड क्यान्सर पीडित युवती आस्ताइन् हस्पिटलको बेडमा
अभिनेता सुशान्त सिंह प्रकरण: उनका सबैभन्दा नजिकका साथी सिद्धार्थ पक्राउ
सियोना श्रेष्ठलाई दिइएको एउटै औषधिको मूल्य २५ करोड
निषेधाज्ञामा जाम देख्दा ट्राफिक नै चकित, पूर्ण रोक लगाउने तयारी